Warbixin :”Dowlada Farmaajo oo lumisay Taageerada dad badan iyo Sababta ka dambeysa | Booqasho News Online - Tabiyaha Wararka Xaqiiqda Ah
Home Wararka Maanta Warbixin :”Dowlada Farmaajo oo lumisay Taageerada dad badan iyo Sababta ka dambeysa
Warbixin :”Dowlada Farmaajo oo lumisay Taageerada dad badan iyo Sababta ka dambeysa
Shacabka Soomaaliyeed ayaa si weyn ugu farxay una taageeray Dowlada Federaalka markii xilka Madaxweynaha loo doortay Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo horey taageero badan uga heestay shacabka Soomaaliyeed.
Dal iyo dibad waxaa ka dhacay banaan baxyo waa weyn oo lagu soo dhaweenayay Guusha Madaxweyne Farmaajo, waxa ayna shacabka Soomaaliyeed aamineen in dowladan ay tahay midii dalka gaarsiin laheyd horumar iyo nabad galyo waarta.
Taageerada iyo Kalsoonida ay shacabka Soomaaliyeed ee ku qabeen Madaxweynaha Soomaaliya ayaa marbo marka ka dambeysay sii yaraaneysay, waxa ayna dowlada hada lumisay dad badan oo sacabada u tumayay sidoo kale caleemo qoyan u ruxayay.
Madaxweyne Farmaajo ayaa noqday mid aan kasoo bixin balamo badan uu horey u qaaday intii olalaha doorashada ku jiray iyo markii la doortay kadiba, waana mida koobaad ee keentay in dad badan dib ula noqdaan taageeradii ay u hayeen Madaxweynaha.
Shacabka Soomaaliyeed ayaa hada dareemaya niyad jab ay ka qabaan Dowlada uu hogaamiyo Farmaajo, waxa ayna hada shacabku kala garan la yihiin Dowlada iyo Mucaaradka midka u roon oo dantooda ka shaqeenaya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa horey u balan qaaday inta aan la dooran in hadii uu guuleesto furi doono wadooyinka xiran ee Muqdisho, sidoo kale joojin doono caadadii aheyd in Madaxda dowlada wadooyinka loo xiro.
Balanqaadkaasi uu sameeyay Farmaajo ma uusan fulin kaaga daran wadooyinkii furnaa ayaaba lasii xiray dhagxaana lagu jaray, waxaa sidoo kale wali taagan caadadii aheyd in shacabka la silciyo laamiyadana la xiro marka ay Madaxda meelo booqabayaan.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale kasoo bixin balan qaadkii ahaa in uu yareen doono safarada dibada , waxa uuna Madaxweynaha hada noqday mid ka safar badan madaxdii isaga ka horeesay marka loo eego mudada uu xilka hayo iyo tira uu dibada u safray.
Dowlada uu hogaamiyo Madaxweyne Farmaajo ayaan wax guul ah ka gaarin dagaalada Al Shabaab lagula jiro, waxaana marar badan uu Madaxweynaha dagaal iclaamiyay dhalisay qataro amni iyo in Al Shabaab kordhiyaan qaraxyada iyo dilalka ay ka geestaan Muqdisho.
Qaraxyadii iyo dilalkii ka dhacayay Caasimada Muqdisho ayaa kordhay billihii ugu dambeeyay, waxaana dad badan wali xasuutaan qaraxii lagu dhamaaday ee ka dhacay Soobe dowladana aysan wali wax fal celin ah ka bixin.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale taageerayaal badan oo dal iyo dibad jooga ku waayay go’aankii Xukuumada Soomaaliya dowlada Itoobiya ugu wareejisay Muwaadinka Soomaaliyeed ee C/kariin Qalbi Dhagax.
Mucaaradka dowlada ayaa xiligan u muuqda kuwa ka faa’iideesanaya dul duleelada Dowlada uu hogamaiyo Farmaajo iyo waliba taageerada ay dowlada kala noqdeen dad badan oo horey ugu helanaa kalsooni badana ku qabay.
Baraha Bulshada oo markii hore si weyn looga taageeri jiray dowlada ayaa hada u muuqda mid dansan ayna ku xoog bateen mucaaradka dowlada, waxaana taasi sabab looga dhigay dadkii dowlada taageersanaa oo sii yaraanaya.
Dadka Siyaasada falanqeeya ayaa rumeesan in Farmaajo uu meel cidlo ah soo istaagi doono uuna lumin doono dadka wali taageersan hadii uusan wax ka bedelin siyaasada uu hada dalka ku maamulo iyo fulin la’aanta go’aanada uu ku dhawaaqo.
Mucaaradka Dowlada Soomaaliya ayaa hada u muuqda kuwa sii xoog badanaya kana faa’iideesanaya qaladaadka dowlada , waxaana mucaardka ay hada bilaabeen in dad badan siyaasadooda ka dhaa dhiciyaan si ay taageero bulsho u helaan.
Previous articleXOGMUHIIM AH”;Maxkamadda Racfaan ee Gobolka Banaadir o Dib u Fureysa Kiiska C/raxmaan C/shakuur
Next articleQORMO :’ Ma laga yaabaa in Imaaraadka iyo Qadar ku Dagaalamaan Soomaaliya Gudaheeda?